“Qalbigeyga ayaa ii sheegay in waqtigaan uu yahay kii aan u saxiixi lahaa PSG” – Neymar – Gool FM
“Qalbigeyga ayaa ii sheegay in waqtigaan uu yahay kii aan u saxiixi lahaa PSG” – Neymar
Liibaan Fantastic August 4, 2017
(Paris) 04 Agoosto 2017 Neymar ayaa loo soo bandhigay saxaafada, wuxuuna ka soo muuqday shir jaraa’id oo ay wada qabteen isaga milkiilaha kooxda ee Nasser Al Khelaifi.
Xiddiga reer Brazil ayaa sheegay in waqtigaan uu yahay kii ugu haboonaa ee ka tagista Barcelona, wuxuuna intaa ku daray in sidoo kale uu yahay waqtigii ugu haboonaa ee ku biirida PSG.
“Waxaan u imid halkaan waayo waxaan doonayay isbadal cusub ee ma ahan in aanan laacib muhiim ah ka ahayn Barcelona, waan ku faraxsanaa Barcelona laakiin waxaan doonayay isbadal cusub” ayuu yiri Neymar.
“Wuxuu ahaa go’aankii iigu adkaa ee aan qaato nolosheyda, waxaan ku sugnaa koox wayn oo ah Barcelona, laakiin qalbigeyga ayaa ii sheegay in la joogo waqtigii aan ku biiri lahaa PSG oo aan samayn lahaa tijaabo cusub”.
“Waqtigii isdiyaarinta xiliciyaareedka ma hubin 100% inaan baxayo, sidaas darteed ayaan ula hadli waayay saxaafada, inbadan ayaan fikirijiray”.
Neymar ayaa cadeeyay inuu diyaar u yahay inuu ciyaaro kulanka ugu horeeya horyaalka faransiiska oo PSG ay barri martiqaadi doonto kooxda Amiens SC 6-da maqribnimo ee waqtiga bariga afrika.
“Haddii la ii ogolyahay inaan ciyaaro kulanka barri ee Amiens SC maxaa diidaya? diyaar ayaan u ahay inaan ciyaaro”.
“Ma daba ordo lacag, waan murugaysanahay waayo dadku waxay rumaysanyihiin inaan ka danbeeyo lacag oo kaliya, dhibka jira ayaa ah inaadan qancin karin dadka oo dhan”.
“PSG waxay leedahay awood ay ku noqon karto kooxda ugu fiican aduunka”.
Barcelona oo diiday inay bixiso lacagtii horay loo qorsheeyay in lasiiyo Neymar aabihiis
Neymar oo u mahadceliyay Javier Pastore kadib markii uu siiyay lambarkiisa